Akụkọ - ihe mmachi “mmachi rọba: mmepe nke plastik nwere ike imebi bụ ihe dị mkpa
Ọganihu "mmachi plastik": mmepe nke plastik nwere ike imebi bụ ihe dị mkpa
Na Disemba 31, 2018, ministri gburugburu na-akwado na nnukwu ụlọ ahịa mba ahụ ga-amachibido iji akpa rọba eji eme ihe site na 2019 iji belata "mmetọ ọcha."
Ndị omebe iwu Europe akwadola ihe ọ kpọrọ “mmachibido iwu kachasị na plastik na akụkọ ntolite,” machibido ngwaahịa plastik niile nwere ike iji ihe ndị ọzọ dị ka kaadiboodu site na 2021 gafee European Union.
Na ngwụcha 2007, General Office of State Council nyere mmachibido na imepụta, ire na iji akpa rọba dị larịị nke na-erughị 0.025 mm site na June 1, 2008, na a ga-akwụ ụgwọ iji akpa ịzụ ahịa rọba. maka.
Ọ bụ ihe nwute, afọ 10 ka amachibidoro ya, echiche nke iji akpa rọba etinyerela ya na nnukwu ụlọ ahịa, mana emebeghị ka mmetọ ọcha belata nke ukwuu. Ka oge na -aga, ịzụta akpa rọba abụrụla ebe a na -enweta ego maka nnukwu ụlọ ahịa.
N'ahịa anụ, obere ụlọ ahịa na obere, ụlọ ahịa n'okporo ámá, ebe a na-ere ahịa n'okporo ámá na mpaghara ndị ọzọ "nwụrụ anwụ", akpa rọba dị larịị ka na-eji "efu efu", abụrụla nkesa nkesa nke ngwa ahịa erere.
Agbanyeghị, n'ime afọ iri gara aga, nnukwu mgbanwe ewerela ọnọdụ akụ na ụba na ọha. Nnyefe nri na nnyefe ngwa ngwa aghọọla nnukwu onye na -azụ akpa plastik. Ụlọ ọrụ na -ebugharị ngwa ngwa nke China riri ihe dị ka ijeri plastik 14.7 ijeri site na ijeri 8.268 na 2008 ruo 2016, dị ka akụkọ sitere na State Post Bureau. Ihe ọhaneze gosikwara na a na -etinye ihe dị ka nde 20 iwu na nyiwe nnyefe nri atọ nke China kwa ụbọchị, na -eji otu ọ dịkarịa ala otu akpa rọba.
Chen Zhongyun, onye otu prọfesọ na Mahadum Sayensị Ọchịchị na Iwu China, kwuru na agbụ gburugburu ebe obibi zuru oke site na mmepụta, ire na imegharị. akpa rọba ekwesịrị ka e guzobe ya na ọkwa amụma na ọkwa mmanye, a ga -ejikwa ụzọ ahịa dị iche iche dị iche iche wee chịkwaa mmetọ ọcha n'ebumnobi nke iwelata mmefu ọha.
“Ọ bụghị ihe ezi uche dị na ya igbochi na machibido iji ngwaahịa a isi. Ọ ga -enwe mmetụta ụfọdụ, mana mmetụta ya agaghị apụta ìhè. ” Dị ka Che Zhenming, onye prọfesọ na ụlọ akwụkwọ nri na bioengineering na mahadum Xihua si kwuo, ihe kacha mkpa bụ ịzụlite. Plastik nke nwere ike imebi ihe.